दिनभरी अर्कै केटा संग सुतेर आउथि राति एकलै सुत्थी,२ बर्ष सम्म मेरो श्रीमतीले मलाई छुन सम्म दिइन – Classic Khabar
दिनभरी अर्कै केटा संग सुतेर आउथि राति एकलै सुत्थी,२ बर्ष सम्म मेरो श्रीमतीले मलाई छुन सम्म दिइन
March 11, 2021 1348
श्रीमान घरमै भएको बेलामा उनी घर छोडेर हिँडेको बताए । त्यो दिन विहानै देखि यता र उता गरिरहेको थियो, उसको हिड्ने योजना रहेछ श्रीमान भन्छन्, हाम्रो बोलचाल राम्रोसंग नभएको २ वर्ष भएको थियो । अर्कोसंग लागेर होला घरमा आएर सबैसंग वि वाद गर्ने गर्थिन, आमाबुवालाई खाना पनि पकाइदिन्थनन् ।
त्यही भएर बोलचाल नै थिएन । उनका श्रीमान ग्रिलको काम गर्ने गरेका छन् ।१० वर्षको छोरालाई आमाको बारेमा झुटो बोलेको बताएका छन् । ममी खै ? भनेर छोराले सोध्छ, राती उठेर यता र उता खोज्छ आमालाई नै खोजेको होला । छोराको ब्यवहार देखेर निकै नराम्रो लाग्छ । घरमै हुँदा पनि उनी घरवाट बारम्बार निस्कने गरेको थियो । जतिबेला मनलाग्यो घर आउने नत्र घरवाट हिड्ने गरेको श्रीमानको भनाई छ ।
Prev…त्यसपछि ओली जुरुक्क उठे ! अनि जे भयो
Nextपशुपतीनाथमा यसपालिको शिवरात्रीमा बाबा जिहरुको यस्तो रुप (भिडियो सहित )
नेपाली युवतीलाई विवाह गर्न चीनबाट आए युवा, भयो यसरी धुमधाम विहे (भिडियोसहित)